June | 2018 | | Myanmar Tech Press
သင်ဟာ Comic ကာတွန်း တွေဖက်ရတာကြိုက်ပါသလား? ကာတွန်းဆိုတာကို စာအုပ်ဆိုင်မှာဘဲဝယ်လာပြီး ဖက်ရတဲ့အရာလို့ဘဲထင်နေပါသလား? အရင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဘဲရှိခဲ့တာဟုတ်ကောင်းဟုတ်ပေမဲ့ အခုခေတ်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမလိုတော့ပါဘူး။ သင်ဆီမှာရှိတဲ့ Smart Phone နဲ့ ကာတွန်းစာအုပ်တွေကိုဖတ်လို့ရနေပြီဖြစ်တဲ့ ခေတ်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းကတော့လွယ်ပါတယ်။ White Merak ကိုပြုလုပ်နေတဲ့ WM
ဟိုတစ်လောက ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ခုရေးမယ်ဆိုပြီး ရှာဖွေနေတဲ့အခါမှာ Facebook Page တစ်ခုကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီ့ Facebook Page ရဲ့ နာမည်ကတော့ ပန်းတိုင် Map ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Page ထဲဝင်ကြည့်လိုက်တော့ ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကိုယ်တွေ့ဆောင်းပါများ၊ လူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားအောင် မေးခွန်းလေးတွေနဲ့
Healthy Humanity Myanmar ကတော့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကနေ Mobile content business စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Healthy Humanity Myanmarကတော့ Application အဟောင်းတွေ၊ လက်ဆောင်ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများပြုလုပ်နေသည့် Get Chance